Cake Champagne Cake oo leh Xumbo Sonkor ah - Sugar Geek Show - Keega
Keeggan champagne-kan casaanka ah ayaa si aan caadi ahayn u qoyan oo qalafsan mahadnaqa shukulaatada dhabta ah ee isku qasan dheriga! Sababtoo ah waxaan jeclahay inaan siyaado noqdo, waxaan ku daray xoogaa goobooyin sonkor ah iyo dhalo champagne ah oo wax u dhimaya culeyska culeyska! Sannad Wanaagsan!
Cake champagne cake waa keeg weyn oo loo isticmaalo dabaaldeg kasta. Waxaa jira wax uun ku saabsan lakabyada casaan ee keega ah ee qeylinaya dabaaldegga! Waxaan u sameeyay keegga shamacaan ee casaanka ah ee Sannadka Cusub laakiin xaqiiqdi waa dhadhan weyn oo keeg ah wakhti kasta. Ku lammaan frosting buttercream fudud taabasho moos ah si ay u diiriso dhadhanka.
Haddii ay dhacdo inaad rabto inaad siyaado ahaato aniga oo kale, halkan waxaa ku yaal liistada dhammaan qalabyada iyo agabyada aan u isticmaali jiray in aan ku sameeyo cufkayga wax u dhimaya keega champagne.
1/8 Wire siligga Armature
Diyaar u ah in la dhalaaliyo Isomalt
1/4 Dow Dowel alwaax
Waxyaabaha ay ka kooban tahay Cake Champagne
Cuntadani waxaan ka soo qaatay keeggeyga jilicsan ee jilicsan ee casaanka laakiin waxaan yareeyay sonkorta xoogaa oo waan ku daray dhadhaminta khamriga iyo dabcan, champagne si loo kariyo. Waxaan sameeyay keegga 'champagne cake' oo casaan ah laakiin waad iska dhaafi kartaa gebi ahaanba haddaad rabto. Midabku saameyn kuma yeelanayo dhadhanka.
Waa maxay Champagne-ka ugu Fiican Cake Champagne?
Ma ogtahay in shaambadayaasha oo dhami aysan isku mid ahayn? Waxay aad ugu kala duwan yihiin wax aan aad u macaaneyn (dabiici naxariis leh) oo aad u macaan (demi sec). Keeggan shambooga ah, wax kasta oo wadada dhexdeeda ah ayaa u shaqeyn doona habka loo karinayo. Ka raadi dhalada erayga 'arxan daran'. Haddii aad isticmaashid shamacaan ka sii macaan sida demi-sec, yaree sonkorta ku jirta cuntada sida 1 Tabeelo si aad ugula taliso macaankaas lagu daray.
Muxuu dhadhamiyaa keega champagne pink?
Waa hagaag, qosol leh waa inaad weydiisaa. Digaag digaag ah oo casaan ah sida… Champagne! In kasta oo ay dad badani u dhadhamin sida saxda ah ee qaadista iyo cabitaanka hal galaas oo ah champagne qurxoon, waxay leedahay dhadhan kala duwan oo leh qoraalo dhadhan macaan oo vanilj leh oo xoogaa dhaldhalaal ah oo isku qasan.
Waa maxay buuxinta aan u isticmaalayo keega champagne-casaanka ah?
Keegga champagne-ka casaanka ah waa mid aad u qurux badan illaa iyo inta buuxintu socoto laakiin dhaqan ahaan wuxuu ugu fiican yahay midho buuxinta sida subag biyo macaan iyo subag subag khafiif ah sida tayda sonkorta buniga ah ee dhaxanta barafka . Waxay sidoo kale si fiican u lammaaneysaa shukulaato cad cad .
Keegga champagne ee casaanka miyuu leeyahay khamri?
Adigoon u galin cilmiga dhamaantiis, jawaabtu waa haa. Markaad dubayso 6 ″ ama 8 ″ lakab, keegga wuxuu hayaa ku dhowaad 10% waxyaabaha ku jira aalkolada. 10 ″ keeg ama ka weyn aalkolada ayaa dubaysa. Haddii aad ka walwalsan tahay inaad wax khamri ah ku harto keegaaga, waad isticmaali kartaa dhadhan shambooga halkii aad ka isticmaali lahayd champagne-ka dhabta ah. Waan isticmaalaa Saliidaha Lorann ee Dhirbaxaya Khamriga .
Cake Champagne Cake Tallaabo-tallaabo ah
Tallaabada 1 - Samee keega . Kuleyli foornada ilaa 335ºF kuna diyaari saddex dheryaal ah 6 ″ x2 ″ keeg keega goop ama nooc kasta oo daayo digsi ah oo aad jeceshahay.
Tallaabada 2 - U adeegso cabir si aad u miisaanka maaddooyinkaaga (oo ay ku jiraan dareerayaasha) haddii aan si kale loo faraynin (Qaadooyinka, qaadooyinka, qayilaada iwm). Qiyaasaha mitirka ayaa laga heli karaa kaarka cuntada. Maaddooyinka miisaanka ku jira ayaa aad uga saxsan isticmaalka koobabka waxayna kaa caawinayaan hubinta guusha cuntadaada.
sida loogu qurxiyo keeg leh fiidiyowyo caw ah oo subag ah
Tallaabada 3 - Ku dar burka, sonkorta, budada dubista, soodhaha, iyo cusbada ku jira baaquli fiicni istaagga leh lifaaqa galka. Isku qas 10 sekan si aad isugu darto.
Tallaabada 4 - Isku dar caanaha iyo saliidda oo dhinac iska dhig.
Tallaabada 5 - Isku dar ukunta cad, dhadhanka khamriga, champagne, iyo vaniljiga si wadajir ah, u garaac si aad ukunta u jebiso, oo dhinac iska dhig. Ku dar midabka casaanka midabka casaanka hadda haddii aad rabto in keegaagu noqdo mid casaan ah. Dhinac iska dhig.
Tallaabada 6 - Ku dar subaggaaga jilicsan walxaha qallalan iskuna walaaq hoose illaa isku darku u eg yahay ciid aan dhab ahayn (illaa 30 ilbidhiqsi).
Tallaabada 7 - Ku dar caanahaaga / saliidaada isku dar oo ha isku walaaqo ilaa maaddooyinka qallalan ay qoyaan ka dibna ku boodaan ilaa med (dhig 4 Kitkeynaidkayga, mid dhig laabtada) oo u oggolow inay isku darto 2 daqiiqo oo buuxa si ay u horumariso qaab dhismeedka keega. Haddii aadan u oggolaan keeggaaga inuu ku qasmo talaabadan keegaaga ayaa burburi kara
Tallaabada 8 - Masax saxankaaga ka dibna xawaaraha hoos u dhig. Ku dar ukuntaada isku dar ah cad cad sadex qaybood, adoo u oggolaanaya isku-darka isku-darka 15 ilbidhiqsi inta u dhexeysa ku darista.
Tallaabada 9 - U qaybi digsiyadaha keega oo dub ilaa 30-40 daqiiqo ama illaa caday ka soo baxdo xarunta si nadiif ah. Yaraynta qaarkood waa caadi.
Tallaabada 10 - SI DEG DEG AH SI AAN SI FUDUD U DHIIB AH DIGASHKA DUKAAN si aad u sii daayo uumiga keega. Tani waxay ka joojinaysaa keega in uu aad u yaraado. Dhig keegga qaboojiyaha aan la furin ilaa 30 daqiiqo si aad u qaboojiso haddii aad rabto inaad isla markiiba qurxiso ama ku duub duub caag ah oo aad barafoojiso illaa aad u baahatid.
Sonkorta buniga ah ee fudud Buttercream
Tallaabada 1 - Ukunta ukunta iyo sonkorta budada ah dhig baaquliaga mashiinkaaga istaaga adigoo ku dhejinaya lifaaqa ku lifaaqan kuna karbaasha dusha sare 5 daqiiqo.
Tallaabada 2 - Ku billow inaad ku darto subaggaaga (jilcisay) jajabyo inta aad karbaashayso illaa inta subagga oo dhan lagu daro. Ku dar milixdaada, aladaha, iyo vanilj.
Tallaabada 3 - Sii wad karbaashidda illaa inta buttercream uusan u muuqan mid la duudduubay oo qalafsan oo cad. Tani waxay qaadan kartaa ilaa 15-20 daqiiqo iyadoo kuxiran mashiinkaaga. Haddii uu dhadhaminayo subag, sii wad isku darka.
Tallaabada 4 - (XULASHO) u beddel lifaaqa galka oo isku qas si hoose illaa 10-15 daqiiqadood si aad uga saarto xumbo ka soo wadata dhaxanta. Qabowgu wuxuu noqon doonaa mid jilicsan tanina waa caadi.
Talo-siin: Haddii subaggaaga subaggu uu aad u qabow yahay oo uu baaquli ku dheggan yahay, qaado hal koob oo microwave u geli 30 ilbidhiqsi. Dib ugu shub burcadka diiran subagga weelka wax lagu shubo waxayna kaa caawin doontaa subagga subaggu inuu karbaasho oo uu noqdo mid ka fududaan oo qalafsan.
Sida Loo Qurxiyo Cake Champagne
Tallaabada 1 - Qabooji keegaaga. Ku diyaari keega keega qiyaastii 1/4 ″ oo ah buttercream oo mari jaakad jajab ah (lakabka khafiifka ah ee buttercream). Qabooji keegaaga mudo 15 daqiiqo ah ka dibna mari jaakadaada ugu dambeysa ee buttercream oo sifiican ugu nadiifi spatula-kaaga miisaska leh iyo xoqitaanka keydka.
Haddii aad u baahan tahay macluumaad dheeri ah oo ku saabsan sida loo dhaxaneeyo keega soo hubi my sida loo sameeyo keegaaga ugu horeeya video.
Tallaabada 2 - Samee xumbadaada. Ku dhalaali qiyaastii 6 wiqiyadood oo ah moofo simi ah oo isomalt ah weel kululaa. Waxaan ku daray qiyaastii 1/4 tsp oo ah boodh dahab dhalaalaya si loo siiyo isomalt midabka champagne.
Tallaabada 3 - Ku shaabadee qaab-dhismeedkaaga qaab-wadareed. Ku shub isomalt dhalaalay caaryada durdur dhuuban. Kadib rog caaryada oo faaruq isomalt-ka xad-dhaafka ah. U oggolow in caaryada gebi ahaanba daato ka dibna u dhig dhinac si ay si buuxda u qaboojiso. Haddii aadan haysan qaab-dhismeedka 3D sphere, waxaad isticmaali kartaa caaryada-nus-wareega oo kaliya aad isku dhajiso adoo si tartiib ah u diirinaya geeska saxan kulul isla markaana labada dhinac isku riixaya.
Meelaha yar yar, waxaan uga tagay iyaga oo adag. Waxaad sidoo kale gacanta ku duuduubi kartaa qaybaha ama waxaad u isticmaali kartaa nacnacyada meel ka mid ah meelaha.
Nullada ka goo goos gooska mindi kulul (kuleylka tooshka jikada) ama kaliya qaribo marka aad ku dhajiso keega. Waxaan sidoo kale ku shubay xoogaa isomalt ah caaryada nus-wareega ah.
Tallaabada 4 - Ku dar faleebadaada. Waxaan isticmaalayaa faleebo fudud laakiin sidoo kale waad isticmaali kartaa biyo ganache oo ku rinji dahab. Waxaan ku dhalaaliyay faleebada microwave mudo 30 ilbiriqsi ah kadib 15-ilbiriqsi oo koror ah ilaa ay dareere noqotay. Dhibicda ha u qaboojiso si ay xoogaa u sii dhumiso laakiin wali waa dareere. Waxaad ku samayn kartaa faleebo tijaabo ah keegaaga la qaboojiyey si aad u hubiso inay tahay isku ekaanshaha saxda ah.
Tallaabada 5 - Dhig caws ah keegaaga la qaboojiyey ilaa uu ka istaagayo salka hoose oo ka jar si aad ula mid noqoto dusha sare ee keega. Saar 1/4 dow qori alwaax caws ah oo ka jar 3 ilaa dusha sare ee keega.
Tallaabada 6 - Ku dheji qayb ka mid ah silig armature hoosta qiyaastii 8 ″ dheer adoo adeegsanaya cajalad aluminium ah.
Tallaabada 7 - Ku dar waxoogaa dhibco ah faleebada illaa ay ka daboolan tahay ama waad ku cadayan kartaa buraashka rinjiga.
sidee u sameysaa nacnac xanjo
Tallaabada 8 - Ku dar dhalada champagne ee madhan dusha sare.
Tallaabada 9 - Goomahaaga ku dheji keegga wax yar oo subag ah. Ku dheji goobooyin midba midka kale adoo adeegsanaya isomalt yar oo dhalaalay. Waxaan u adeegsaday qalab silikoon ah isomalt-ka. Waxaad u baahan tahay oo keliya qaddar yar.
Taasi miyaanay ahayn keegga ugu quruxda badan ee loo yaqaan 'champagne cake' aad waligaa aragtay! Waxaan dareemayaa sida sawirada kaliya aysan u sameynin cadaalad. Waan jeclahay sida goobooyinku u egyihiin iyo faleebada ayaa aad u qurux badan!
La socodsii faallooyinka haddii aad sameyso keeggan oo ha ilaawin inaad igu calaamadeyso qoraaladaada! Sannad Wanaagsan!
Brown Sonkor Swiss Meringue Buttercream
Casharka Cake Champagne Cake
Biyo Ganache Faleebo
Cake champagne pink leh sonkor bunni fudud buttercream, goobooyin sonkor ah iyo dhalada champagne aafidda cuf isjiidadka! Waqtiga Diyaarinta:shan iyo toban daqiiqado Waqtiga karinta:30 daqiiqado Wadarta Waqtiga:Afar. Shan daqiiqado Kalori:1817kcal
▢13 oz (368 g) bur keeg
▢10 oz (284 g) sonkorta
▢1 Miisaska cuntada budada dubista
▢1/2 qaaddo shaaha Fixiso
▢6 ounces (170 g) subag aan cusbo lahayn qolka
▢4 ounces (113 g) caano subag qolka
▢6 oz (170 g) champagne qolka
▢4 ounces (113 g) ukun cad qolka
▢1 1/2 tsp dhadhan nacnac khamri dhalaalaya (ikhtiyaar) xiriiriye xiriiriye: https://www.amazon.com/dp/B007BIDREU/?ref=exp_sugargeekshow_dp_vv_d
▢1-2 dhibco midab casaan koronto leh Ikhtiyaari ah haddii aad rabto keega champagne pink
Sonkorta buniga ah ee fudud ee Buttercream Frosting
▢8 oz (227 g) Ukunta Pasteurized
▢32 oz (907 g) Subag aan cusbo lahayn
▢32 oz (907 g) Sonkor budada ah
▢1 Miisaska cuntada Molasooyin
▢1/8 'siligga Armature
▢1/4 'qori alwaax ah
Kuleyli foornada illaa 335ºF. Hubso in dhammaan walxahaaga (champagne, ukunta, subagga) ay ku jiraan heerkulka qolka
U adeegso cabir si aad u miisaanka maaddooyinkaaga (oo ay ku jiraan dareerayaasha) haddii aan si kale loo faraynin (Qaadooyinka, qaadooyinka, qayilaada iwm). Qiyaasaha mitirka ayaa laga heli karaa kaarka cuntada. Maaddooyinka miisaanka ku jira ayaa aad uga saxsan isticmaalka koobabka waxayna kaa caawinayaan hubinta guusha cuntadaada.
Diyaarso seddex dherer 6'x2 'keeg ah oo leh kek ama wax kale oo lagu buufiyo digsiga. Buuxi weelkaaga qiyaastii 3/4 ee dariiqa buuxa ee batteriga.
Isku dar caanaha iyo saliida isla markaana dhinac iska dhig.
Isku dar ukunta cad, dhadhanka khamriga, champagne iyo vaniljiga si wadajir ah, u garaac si aad ukunta u jebiso, oo dhinac iska dhig. Ku dar midabka casaanka midabka casaanka hadda haddii aad rabto in keegaagu noqdo mid casaan ah. Dhinac iska dhig.
Ku dar subaggaaga jilicsan walxaha qallalan oo isku walaaq hoose illaa isku darku u eg yahay ciid aan dhab ahayn (qiyaastii 30 sekan). .
Ku dar caanahaaga / saliidaada isku dar oo ha isku walaaqo ilaa walxaha qallalan ay qoyaan ka dibna ku boodaan ilaa med (dhig 4 on my kitchenaid, dhig mid ka mid ah laabta) oo u ogolow inay isku qasto 2 daqiiqo oo buuxa si ay u horumariyaan qaabeynta keega. Haddii aadan u oggolaan keeggaaga inuu ku qasmo talaabadan keegaaga ayaa burburi kara
Xaaq weelkaaga ka dibna xawaaraha hoos u dhig. Ku dar ukuntaada isku dar ah cad cad sadex qaybood, adoo u oggolaanaya isku-darka isku-darka 15 ilbidhiqsi inta u dhexeysa ku darista.
U qaybi digsiyadaha keega oo dub ilaa 30-40 daqiiqo ama illaa caday ka soo baxdo xarunta si nadiif ah. Yaraynta qaarkood waa caadi.
SI DEG DEG AH SI AAN SI FUDUD LOOGU SOO DHAWEEYNO DUKAANKA DUKAANKA dusha sare ee miiska dushiisa hal mar si aad uumiga uga soo siiso keega. Tani waxay ka joojinaysaa keega in uu aad u yaraado.
Ku rid ukunta cad iyo sonkorta budada ah weelka dhajiskaaga istaaga adigoo ku dhejinaya lifaaqa ku dheji oo karbaasha dusha sare 5 daqiiqo
Ku billow inaad ku darto subaggaaga (jilcisay) jajabyada inta ay karbaashayso illaa inta subagga oo dhan lagu daro. Ku dar milixdaada, aladaha, iyo vanilj.
Sii wad jeedalinta ilaa buttercream uma muuqato mid la duubay oo waa qalafsan yahay oo cad yahay. Tani waxay qaadan kartaa ilaa 15-20 daqiiqo iyadoo kuxiran mashiinkaaga. Haddii uu dhadhaminayo subag, sii wad isku darka.
(XULASHO) u beddel lifaaqa suufka oo isku qas si hoose illaa 10-15 daqiiqadood si aad uga saarto xumbo barafowga. Qabowgu wuxuu noqon doonaa mid jilicsan tanina waa caadi.
Waxyaabaha Muhiimka ah ee ay Tahay inaad Ogaato Kahor Intaadan Bilaabin 1. U soo qaado dhammaan waxyaabaha aad ka kooban tahay heerkulka qolka ama xitaa xoogaa diiran (ukumo, caano subag, subag, iwm) si loo hubiyo in dubkaagu uusan jebin ama uusan curricamaynin. 2. U adeegso cabir si aad u miisaanka maaddooyinkaaga (oo ay ku jiraan dareerayaasha) haddii aan si kale loo faraynin (Qaadooyinka, qaadooyinka, qayilaada iwm). Qiyaasaha mitirka ayaa laga heli karaa kaarka cuntada. Maaddooyinka miisaanka ku jira ayaa aad uga saxsan isticmaalka koobabka waxayna kaa caawinayaan hubinta guusha cuntadaada. 3. Layliska Mise en Place (wax kasta oo meesha ku jira). Cabbiro maaddooyinkaaga ka hor wakhtiga oo diyaari iyaga ka hor inta aanad bilaabin isku-darka si loo yareeyo fursadaha si shil ahaan wax uga tagi kara. 4. Qabooji keegaaga ka hor dhaxan iyo buuxin. Waad ku daboolan kartaa keega barafoobay oo la qaboojiyey ee xiisaha leh haddii aad rabto. Keeggan sidoo kale waa u fiican yahay isku dhejinta. Had iyo jeer waxaan ku hayaa keegayaga in aan ku qaboojiyo qaboojiyaha ka hor intaan la keenin si loogu qaado gaadiid fudud. Wax badan ka baro qurxinta keeggaaga ugu horreeya. 5. Haddii cuntada lagu kariyo ay ku baaqeyso waxyaabo gaar ah sida burka keega, ku beddelashada dhammaan ujeeddada bur iyo galleyda laguma talinayo haddii aan lagu caddeyn karinta inay ok tahay. Beddelashada maaddooyinka ayaa sababi kara in karintani ay fashilanto. Dhammaan ujeeddada burku waa bur caadi ah oo aan lahayn wakiilo kacaya. Waxay leedahay heer borotiin ah 10% -12% Daqiiqda Keeg waa daqiiq jilicsan, oo bur ah borotiin ka yar 9% ama ka yar.
U adeegida:1adeegaya|Kalori:1817kcal(91%)|Kaarboohaydraytyada:186g(62%)|Protein:12g(24%)|Dufan:118g(182%)|Dufan Dufan:75g(375%)|Kalastarol:291mg(97%)|Sodium:475mg(labaatan%)|Kaliumperyamper:317mg(9%)|Fiber:1g(4%)|Sonkor:149g(166%)|Vitamin A:3635IU(73%)|Vitamin C:1mg(1%)|Kaalshiyam:127mg(13%)|Bir:1mg(6%)
karinta keegga rootida ee keega lagu dubo
sida loo sameeyo strawberry muddo dheer
keegga 'strawberry cake' oo isku dar ah cuntooyinka leh strawberries cusub
sida loo sameeyo keega vaniljka qoyan
rooti fudud oo fudud oo leh khamiir